‘घामड शेरे’फिल्मलाई दर्शकले पत्याउलान्? – Hotpati Media
‘घामड शेरे’फिल्मलाई दर्शकले पत्याउलान्?
२१ कार्तिक २०७६, बिहीबार २०:१८ मा प्रकाशित (9 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : २ मिनेट
काठमाडाैं-मल्टीप्लेक्स हलमा ‘घामड शेरे’ फिल्मले राम्रो सो हात पारेको छ । कात्तिक ८ गतेका लागि नेपालको सबैभन्दा ठूलो मल्टीप्लेक्स चेन क्यूएफएक्समा ‘घामड शेरे’ ले राजधानीको पाँच स्टेशनमा ६ सो पाएको थियो । कात्तिक २२ गतेलाई १७ सोज हात पारेको छ । त्यस्तै, उपत्यका बाहिरको ४ स्टेशनमा फिल्मले १२ सो पाएको छ ।
क्यूएफएक्स च्यानलमा मात्र २९ सोमा प्रदर्शन आरम्भ गर्न लागेको यो फिल्मलाई राजधानीको विग मुभिजले ५ सोज बाँड्दा क्यूज सिनेमाज्, सिडिसी सिनेमाज् र विएसआर सिनेमाज्ले समान्तर ३/३ सो प्रदान गरेका छन् । त्यस्तै, वान सिनेमाज् र एफक्यूब सिनेमाज्मा फिल्मले ४ सो हात पारेको छ । फिल्म देशैभर ८५ बढी हलमा प्रदर्शन हुने बताइएको छ । मल्टीप्लेक्स सो र हल संख्या हेर्दा फिल्मको ओपनिङ आक्रामक हुने देखिन्छ ।
रिलिजपूर्व गीतसंगीतका कारण फिल्मले राम्रो हाइप निर्माण गरेको छ, जसको फाइदा बक्सअफिसमा पर्नसक्छ । पहिलो पटक ‘रियल कपल’ निश्चल र स्वतिमाले अनस्क्रिन रोमान्स गरेका कारण पनि फिल्मको इनिसियल व्यापार आक्रामक हुने फिल्म पण्डितहरुको अनुमान छ । तर, प्रदर्शन मिति फेरबदल भएका कारण त्यसको असर बक्सअफिसमा पर्न सक्ने आँकलन पनि गरिएको छ ।
खोलालाई मुद्धा हाल्ने विषयमा केन्द्रित ‘घामड शेरे’ मा निश्चल र स्वस्तिमा भेना र सालीको भूमिकामा छन् । फिल्ममा निश्चलको श्रीमतीको भूमिकामा सुष्मा निरौला छिन् । गौरी मल्लको अतिथी भूमिका रहेको फिल्ममा बादल भट्ट, लोकेन्द्र लेखक, सरोज अर्याललगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय छ । नरेन्द्र मैनालीको छायांकन रहेको फिल्मको कथा तथा पटकथा निर्देशक विसीले नै लेखेका हुन् ।